Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Kedu ka esi gwọọ ehighi ura na mgbochi nchegbu?
Banana na-eti ehighị ụra nke ọma na mgbochi nchegbu, nke US FDA kwadoro.
TCI Co., Ltd. anọwo na-etinye aka na nyocha na mmepe nke peels banana na stamen banana, ma mechaa nweta nkwado US FDA NDI n'etiti afọ a, ghọọ banana NDI mbụ n'ụwa. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ngwaahịa banana nke Taiwan ịbanye n'ụwa, ọ nwekwara ohere ka mma iji jide iri puku ijeri dollar na nri ahụike na United States.
TCI dị na Taiwan kwupụtara na “Banana Peel, Banana Stamen” anatala nzaghachi nchekwa nchekwa NDI ọhụrụ nke FDA, wee kwado ya maka ịdepụta na ahịa US. Nke a bụkwa nke mbụ n'ụwa na banana ọhụrụ na-egbochi nchegbu nchegbu na ihe ọhụrụ nri banana nwoke ahụike bụ nke US FDA kwadoro, nke a na-atụ anya na ọ ga-ebugharị ụlọ ọrụ banana ụlọ wee banye n'ụwa iri iri. nke ijeri dollar n'ahịa nri ahụike. A na-eji peels banana na stamen banana mee ihe na mba Europe na America, n'ihi na ọ dịghị akụkọ ihe mere eme nke nri dị mkpa na ihe ndị dị mkpa n'oge gara aga, ma na ntinye nke nri ahụike ma ọ bụ ịkwalite ihe enyemaka ahụike, ọ na-esikarị ike. N'oge gara aga, peels banana, dị ka ihe mkpofu ugbo bụ nke a tụfuru na mbụ na enwere ike iji ya mee ihe dị ka ihe mkpofu kichin, ha niile gbanwere ghọọ ihe ndị bụ isi nke nri dị mma n'okpuru mmepe nkà na ụzụ siri ike nke TCI.
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-enwe nchegbu na ịda mbà n'obi n'ụwa na-amụba kwa afọ. TCI si mbụ patented “Banana Peel Ultrasonic Cold Extraction”, banana obi ụtọ ewepụtara na bee banana, nwere ihe ndị yiri ya na ọgwụ melancholic Prozac, nke nwere ike melite nchekasị, nchekasị na ehighị ụra nke ọma. Ọmụmụ anụmanụ gosiri na a chọpụtara na mpụta peel banana na-eji ọnụ na-arụ ọrụ mgbochi nchegbu na ịda mbà n'obi na nlekota ọrụ omume. Nnyocha egosiwokwa na bee banana nwere ike imeziwanye ụzọ tryptophan metabolism ụzọ jikọtara okwu mkpụrụ ndụ ihe nketa, kwalite mmepụta nke serotonin na melatonin n'ime ahụ mmadụ, ma nweta mmetụta na-ebelata ụra. Ihe mepụtara Banana Happy enwetala ọtụtụ onyinye mba ụwa, gụnyere ihe nrite pụrụ iche na ihe nrite ọla edo na ihe ngosi ihe ngosi Geneva na Switzerland.
Na mgbakwunye, Happy Angel tumadi na-eji banana stamens, nke sitere na unere, nke ihe ọ na-ewepụ nwere ike igbochi prostate ịgbasa. Nnyocha e mere egosiwo na ọ nwere ike belata mmepụta nke dihydrotestosterone nke ọma na sel testicular ma gbochie mgbasa nke mkpụrụ ndụ prostate mmadụ. O nwetakwara ihe nrite ọla edo na ihe ngosi ihe ngosi Geneva. Ugbu a na US FDA NDI kwadoro peel banana na stamen banana, ọ bụ ihe dị mkpa maka ngwaahịa ugbo Taiwan-banana ịbanye n'ụwa. Nnyocha dị iche iche na mmepe nke peels banana na stamen banana ewetawo ọganihu ọhụrụ na nri ahụike, yana kwa n'oge ọrịa na-efe efe, na-enye ndị na-azụ ahịa nhọrọ ndị ọzọ na nri ahụike.